Funipica Photo Lens အား ကမာရွတ် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
Funipica Photo Lens – ငါးမျက်လုံး၊ မိသားစု ဓာတ်ပုံ၊ သေးသေးလေးတွေကို ရိုက်ဖို. Funipica Photo Lens လေး ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းစားနဲ. ပုံမှန် အစား နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။
ဖုန်း ကင်မရာ lens
မိသားစုနဲ. ဓာတ်ပုံရိုက်ရန် မြင်ကွင်းအပြည့် ရိုက်နိုင်မယ့် Super Wide Lens
တိရိစ္ဆာန်လေးတွေ၊ စာလုံးသေးတွေကို လေ့လာ ရိုက်ကူးနိုင်မယ့် Macro Lens
ငါးမျက်လုံးပုံစံ selfie ဓာတ်ပုံလေးတွေ ရိုက်ကူးနိုင်မယ့် Fisheye Lens
Funipica Photo Lens – 37000 kyats
စောင့်ဆိုင်းချိန် – 48 hours
ဝယ်ယူလိုသော ဒီဇိုင်းပုံကို save လုပ်ပြီး fb message မှ ဖြစ်စေ၊ comment မှ ဖြစ်စေ၊ viber မှ ဖြစ်စေ၊ မှာယူနိုင်ပါပြီ။
ဖုနျး ကငျမရာ lens
Funipica Photo Lens – ငါးမကျြလုံး၊ မိသားစု ဓာတျပုံ၊ သေးသေးလေးတှကေို ရိုကျဖို. Funipica Photo Lens လေး ဖွဈပါတယျ။ အကောငျးစားနဲ. ပုံမှနျ အစား နှဈမြိုး ရှိပါတယျ။
မိသားစုနဲ. ဓာတျပုံရိုကျရနျ မွငျကှငျးအပွညျ့ ရိုကျနိုငျမယျ့ Super Wide Lens
တိရိစ်ဆာနျလေးတှေ၊ စာလုံးသေးတှကေို လလေ့ာ ရိုကျကူးနိုငျမယျ့ Macro Lens
ငါးမကျြလုံးပုံစံ selfie ဓာတျပုံလေးတှေ ရိုကျကူးနိုငျမယျ့ Fisheye Lens
Universal Photo Lens – 27000 kyats
စောငျ့ဆိုငျးခြိနျ – 48 hours
ဝယျယူလိုသော ဒီဇိုငျးပုံကို save လုပျပွီး fb message မှ ဖွဈစေ၊ comment မှ ဖွဈစေ၊ viber မှ ဖွဈစေ၊ မှာယူနိုငျပါပွီ။
အမည်: Funipica Photo Lens